Ihe ị ga-ahụ na Slovenia | Akụkọ Njem
Este Ọchịchị Central Central Europe bụ akụkụ nke European Union ọ na-enye anyị ebe ndị mara mma. Ingga njem na Slovenia nwere ike ịbụ ezigbo nchọta, yana ebe dịka Bled, Piran ma ọ bụ Ljubljana na ndị ọzọ. Nọ naanị otu siri ike nke mere na anyị ga-ahụ ndị bụ isi enwere ike ịhụ na Slovenia, mba dị ịtụnanya nwere oghere mara mma na nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na obodo ndị ga-emeri anyị na akụkọ ntolite ha.
Slovenia nwere ike ọ gaghị abụ njem nleta dị ka Croatia gbara agbata obi mana ọ nwere nke ukwuu iji nye anyị Ọ bụ ya mere ọ ga-eji bụrụ ihe ijuanya nye ọtụtụ ndị njem na-atụkwasịghị obi na nkuku ndị nwere ya. Ka anyị lee ihe ndị na-adọrọ mmasị anyị na-ekwesịghị ịhapụ na Slovenia.
4 Redlọ Predjama
6 Mmiri Kozjak
7 Vintgar akpiri
Mgbe a na-ekwu maka ihe a pụrụ ịhụ na Slovenia, anyị aghaghi ibido isi obodo. Ọ bụghị nnukwu obodo nke anyị nwere ike ịhụ n'ime omimi n'ọtụtụ ụbọchị. Lọ ya dị n’elu igwe n’elu obodo ya kemgbe narị afọ nke iri na abụọ. E wughachiri ụlọ nke dị taa na narị afọ nke XNUMX. Nwere ike ịga njem ma aụọ ihe ọ theụ drinkụ na ogwe ndị dị na ya, na mgbakwunye na ileta ya kpamkpam. Na isi obodo anyi aghaghi ihu Bridge nke Dragons, nke a kpụrụ n’akụkụ nke ihe oyiyi dragọn, ma ọ bụ Katidral nke Saint Nicholas, otu n’ime ihe ndị mara mma na Europe. Obodo ahụ na-enyekwa ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie, dịka National Gallery, Museum nke Modern Art ma ọ bụ National Museum. Ọ bụrụ n’ikpeazụ anyị chọrọ izu ike site n’ọtụtụ nleta, anyị nwere ike ịgagharị na mmiri Ljubljana ma ọ bụ zuo ike na Tivoli Park, ebe enwere griin haus na ọba akwụkwọ ghere oghe.
Obodo a abụrụla nke alaeze dị iche iche ma n'ezie, a na-asụ Slovenian na Italian taa. Dị ka ọtụtụ obodo ndị ọzọ ghere oghe n'oké osimiri, Piran nwere mgbidi ochie nke bidoro iwu na narị afọ nke asaa. Ugbu a anyị nwere ike ịhụ naanị obere oghere na-adịgide. Enwere ike ịrịgo mgbidi ahụ ma ọ bara uru ịgagharị ebe a iji nwee ike ịhụ echiche dị na obodo na oke osimiri. Katidral nke St. George bụ ụlọ okpukpe ya bụ isi ma nwee ụdị Renaissance Venet nke na-adọta uche, ọkachasị n'ime ime ya, jupụtara na frescoes na nkọwa. Obodo a na-enyekwa oke osimiri di egwu, ya na mpaghara nke ulo nkpuru na ulo nri na udiri osimiri ebe inwere ike ihu igwe. Banyere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ha nwere ọtụtụ ihe ha ga-eme na ya ịbụ obodo dị n'ụsọ osimiri, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịga na Museum of Shells, the Maritime Museum ma ọ bụ Museum nke Ihe Omume Mmiri.
Bled dị ntakịrị obodo dị n'akụkụ Ọdọ Mmiri Bled. N'ezie, ihe kacha adọta mmasị nke mpaghara a bụ kpọmkwem ọdọ mmiri ahụ, nke ị ga-ahụrịrị na ọtụtụ foto. O kwere omume iburu ụgbọ mmiri iji gafee nnukwu ọdọ mmiri ahụ wee rute obere agwaetiti ya, nke ụka nke Assumption pụtara. Ngwongwo ọzọ dị na okpueze na mpaghara Bled bụ ụlọ ya. Castle nke bled na-anọdụ ala n’elu ugwu dị n’elu ọdọ ahụ, nwere echiche dị egwu. N'ime ụlọ ahụ, anyị nwere ike ịhụ ụlọ ụka Gothic nke narị afọ nke XNUMX, ogige, ụlọ ngosi nka nke ụlọ ma ọ bụ winery. Na mgbakwunye, enwere ije n'akụkụ ọdọ mmiri ma ị nwere ike ịga mkpagharị iji nwee echiche ka mma banyere gburugburu gburugburu ebe a na-ele ihe anya.
Spectlọ a mara mma dị n'ọnụ ọnụ ọgba, nke dị n'ime nkume, o yikwara ka ọ na-esite na ya pụta, ya mere ọ na-adọta mmasị dị ukwuu. Ọgba a bụ ebe Baron Erazem Luegger ndo mgbe ha zuru ohi ndị ahịa bara ọgaranya bụ ndị si Vienna gaa Trieste. Nnukwu ụlọ ahụ na-echekwa ụdị Gothic nke Central Europe yana ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ọ, mgbe ụfọdụ ọ nweghị ike ichebe onwe ya pụọ ​​na mwakpo.
Abaitiat ndị a bụ ọla dị n'okike na Slovenia ma ama nke ọma. N'ime anyị nwere ike ịhụ usoro nzu nzu na-atọ ụtọ ịrịba mita ise stalagmite. Tụkwasị na nke a, n'ime ọgba ị nwere ike ịga njem ụgbọ oloko na-atọ ụtọ nke ga-atọ ezinụlọ gị dum ụtọ.
Mmiri mmiri ndị a bụ achọtara na ọwụwa anyanwụ Slovenia, na nso Triglav Park. Thezọ nke gafere osimiri ahụ na nsụda mmiri ahụ mara ezigbo mma. Na mgbakwunye, ọ nwere uru na ọ dị mkpụmkpụ ma dịkwa mfe, yabụ ị nwere ike soro ụmụaka gaa. Ebube mara mma nke ebe ndị a na-ekwu okwu n'onwe ya.
Naanị kilomita ole na ole site na Bled anyị anyị hụrụ ọmarịcha ala a. Ogwurugwu a na-ahụ mmiri turquoise na-agba n'etiti mgbidi ya. E nwere ụzọ osisi nke mara mma nke ukwuu na nke na-enweghị obi abụọ na-enye ụzọ a ga-emerịrị na Slovenia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Slovenia » Ihe ị ga-ahụ na Slovenia